छोटो लुगा लगाएर बलात्कार हुनेभए यहाँ ३ महिने बालिका किन ब*लात्कृ’त ? - UjyaloNepal
२०७८ बैशाख २८ गते, मंगलवार प्रकाशित
यसको पहिलो कारण गरिबी, अशिक्षित र जनचेतनाको कमिका कारणले हो त । हो भने किन पुरा नगरेको हो रु नेपाल सरकारले जबाफ चाहियो ? अहिले पनि मानिसमा जनचेतनाको कमि रहिरहेको छ । अहिले पनि छोरा र छोरीमा भेदभाव भइरहेको छ । छोरी भनेको बिहे गरेर अरूको घर जाने जात हो। छोरी ले नै हरेक पिडा सहेर बस्नु पर्छ भन्ने जस्ता विभिन्न कुसंस्कार, अन्धविश्वास फैलाउँदै र सुन्दै आएका छौँ ।
जसले गर्दा हामी महिलालाई अगाडि बढ्न रोकी रहेको छ । अब हामी एकचोटी हाम्रो बिगतमा जाऊ, जब एउटा महिलाको मृत्यु हुन्थ्यो भने पुरुषले अर्को बिबाह गर्थ्यो । पुरुषको मृत्यु हुँदा महिलालाई जिउँदै जलायर मारिन्थ्यो, त्यस्लाई एउटा संस्कृतिको नाम दिएता पनि त्यो संस्कृतिको नाममा वि*कृति भइरहेको थियो।
आफ्नो स्वतन्त्रताको उचित प्रयोग गर्न पर्छ । आफु कसैमा निर्भर हुनु हुँदैन । बाटोमा हिँड्दा कसैले नराम्रो नजरले हेरेको छ भने कहिले पनि इग्नोर गर्नु हुन्न उति बेला नै बोल्नु पर्दछ, आफूले आफैलाई कमजोर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन । अनि अहिले विभिन्न संस्थाहरुले पनि महिला हिं,सा विरुद्ध आवाज उठाइ रहेको छ ।
कोरोना महामारि नियन्त्रणका लागि ७० जिल्लामा निषेधाज्ञा
जन्म दिएकै दिन बाट टाढिएकी मेरी उनी
लुम्बिनी प्रदेशमा ४७ हजारले जिते कोरोना, कुल संक्रमितमा १.४७ प्रतिशतको मृत्यु
गुल्मीमा आज थप १६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम